तरकारीमा नुन चर्को हुँदा के गर्ने ? चर्को नुन घटाउने अचुक उपाय «
तरकारीमा नुन चर्को हुँदा के गर्ने ? चर्को नुन घटाउने अचुक उपाय
धेरै मिहिनेत गरेर तरकारी अथवा दाल त बनाइन्छ, तर कहिले काहिँ भने नुन बढी भएर धेरैलाई चिन्ता पर्ने गर्छ। नुन बढी भएको तरकारी खान गार्है पर्छ। यस्तै आफ्नो मिहिनेत परेको हुँदा फाल्न पनि त्यति सजिलो हुँदैन। नुन बढी भएको तरकारी र दाललाई के गर्न सकिन्छ ? हेर्नुहोस् स्पेशल किचन टिप्स :